Kooxda Real Madrid oo war rasmi ah kasoo saartay hadal uu maanta sheegay Mauricio Pochettino – Gool FM
(Spain) 24 Maajo 2019. Real Madrid ayaa war rasmi ah kasoo saartay maanta oo jimco ah hadalo uu ka dhawaajiyay macalinka reer Argantina iyo kooxda Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino, dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay.
Macalinka reer Argantina ayaa wareysi uu bixiyay xili hore ee Maanta wuxuu kaga hadlay, in kooxda Tottenham Hotspur codsatay joogitaankeeda magaalada isboortiga Valdebebas ee caasimada Madrid, si ay ugu diyaar garowdo kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Liverpool.
Ciyaartoyda Tottenham ayaa waxay tababar ku sameenayn doonaan magaalada Valdebebas ee dalka Spain maalmaha khamiista iyo Jimcaha soo aadan kahor kulanka Sabtida, halka Pochettino wareysi uu ku bixiyay Radio Cadena uu ku sheegay, in kooxdiisa ay weydiisatay Real Madrid in halkaas ay joogi karaan.
Hadaba war rasmi ah ee kasoo baxay kooxda Real Madrid ayaa waxaa lagu sheegay:
“Real Madrid waxay la yaabtay hadalka kasoo yeeray macalinka kooxda Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ee ku saabsan, codsi la sheegay in kooxda ay u ogolaato Spurs-ka joogitaanka magaalada isboortiga sababa la xiriira munaasabada finalka Champions League”.
Warkan kasoo baxay kooxda Real Madrid ayaa waxaa intaas lagu sii daray:
“Real Madrid waxa ay dooneysaa inay cadeeyso in tani ay tahay wax ceeb ah isla markaana kooxda aysan helin wax codsi ee gaar ah, waxaan mar walba muujinay diyaargarowgeena buuxa si aan u daboolno dhamaan codsiyada ka yimaada xiriirka yurub ee EUFA, iyo kan Spain, ee ku aadan kooxaha Atletico Madrid, Liverpool iyo Tottenham”.
“Dhamaan codsiyada lasoo gaarsiiyay kooxda Real Madrid waxay ahaayeen kuwo la xiriira isticmaalka goobaha tababarka ee magaalada isboortiga ee Valdebebas iyo qolalka labiska, waxaana ka bixinay ogolaansho”.
Si kastaba ha ahaatee Liverpool ayaa tababarka ku qaadan doonta magaalada Valdebebas subaxnimada maalinta Sabtida ee 1-da bisha Juun, halka Tottenham dhankeeda aya tababar ku qaadan doonto Khamiista 30-ka Maajo iyo Jimcaha, 31-ka Maajo, sida lagu sheegay bayaanka rasmiga ah.